Rakhine – KALADAN PRESS NETWORK
About 1,500 Burma Army troops arrived by ship in southern Maungdaw on January7and were then transported by truck to northern Maungdaw, according to local villagers. Continue reading “Burma Army deploys 1,500 troops to northern Maungdaw amidst lull in fighting”
ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် မောင်တော တောင်ပိုင်းသို့ မြန်မာစစ်တပ်တပ်သား ၁၅၀၀ ခန့် သင်္ဘောဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မောင်တောမြောက်ပိုင်းသို့ ထရပ်ကားဖြင့် သယ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။ Continue reading “တိုက်ပွဲရပ်နားချိန်တွင် မြန်မာစစ်တပ်အင်းအား ၁၅၀၀ မောင်တောမြောက်ပိုင်းသို့ သွားလာလှုပ်ရှားနေခြင်း”
The Norwegian contact point of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) has decided evidence warrantsaformal investigation into whether Norway’s state-owned telecom company-Telenor, has violated OECD rules in the construction ofatelephone tower in Alethankyaw village, Maungdaw township, northern Rakhine State during the Burma Army’s brutal “clearance” campaigns in 2016 and 2017.
Telenor Tower in Alethankyaw
Continue reading “OECD: investigation warranted into Telenor’s role in atrocities against Rohingya”
မျက်မြင်သက်သေများ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ မောင်တောမြောက်ပိုင်းသို့ အသစ်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်များသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်မှစ၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့် “ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ”စစ်ဆင်ရေးအတွင်း သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာရွာသားများ၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မြှုပ်ခဲ့သည့်သင်္ချိုင်းများကို ဖျက်စီးပစ်နေခြင်းများလုပ်ဆောင်နေသည့်ဟု ပြောဆိုသည်။ Continue reading “မောင်တောမြောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု သက်သေအထောက်အထားများ ကို အသစ်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာစစ်တပ်တပ်များက ဖျက်ဆီးပစ်နေ”
According to eyewitness sources, Burma Army troops newly deployed to northern Maungdaw have during the past week been destroying evidence of mass graves of Rohingya villagers killed in the August 2017 “clearance operations.” Continue reading “Newly deployed Burma Army troops destroying evidence of Rohingya genocide in northern Maungdaw”
မြန်မာစစ်တပ်သည် မောင်တောတစ်လျှောက် သင်္ဘောများဖြင့် စစ်သည် ၃၀၀၀ ကျော်စေလွှတ်ခဲ့
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ စ၍ အင်းဒင်းရှိ မောင်တောကမ်းခြေမှ ရေတပ်သင်္ဘော ၄ စီးမှ မြန်မာစစ်တပ် ၃၀၀၀ ကျော်ကို သယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မောင်တောမြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းတို့တွင် နေရာချထားခဲ့သည်ဟု ရိုဟင်ဂျာ စက်လှေမောင်းနှင်းသူများကပြောကြားသည်။ Continue reading “မြန်မာစစ်တပ်သည် မောင်တောတစ်လျှောက် သင်္ဘောများဖြင့် စစ်သည် ၃၀၀၀ ကျော်စေလွှတ်ခဲ့”
Since September 10, over 3,000 Burma Army troops have disembarked from four navy ships off the Maungdaw coast at Inn Din, and been deployed to northern and southern Maungdaw, according to Rohingya boat drivers forced to transport the troops. Continue reading “Burma Army deploys over 3,000 ship-borne troops across Maungdaw”
မြန်မာစစ်တပ် မှ အင်အား ၁၀၀၀ ခန့် အင်းဒင်း မှ မောင်တောမြောက်ပိုင်း သို့ တစ်ညတည်း စက်လှေဖြင့် ရောက်ရှိလာ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက်စောစောတွင် မောင်တောမြောက်ပိုင်းသို့ မြန်မာစစ်တပ်အင်အား ၁၀၀၀ ခန့်သည် စက်လှေဖြင့် ရောက်ရှိလာသည်ဟု ရိုဟင်ဂျာ စက်လှေမောင်းနှင်သူတစ် ဦး က အင်းဒင်မှ ညနေပိုင်းတွင်စစ်သားများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည့်ဟု ပြောဆိုသည်။ Continue reading “မြန်မာစစ်တပ် မှ အင်အား ၁၀၀၀ ခန့် အင်းဒင်း မှ မောင်တောမြောက်ပိုင်း သို့ တစ်ညတည်း စက်လှေဖြင့် ရောက်ရှိလာ”
About 1,000 Burma Army troops arrived by boat in northern Maungdaw early in the morning of September 11, 2020, according toaRohingya boat driver forced to transport the troops overnight from Inn Din. Continue reading “1,000 Burma Army troops arrive overnight by boat to northern Maungdaw from Inn Din”
Press Release: 1 May 2020
On April 10, 2020, the Myanmar Ministry of Foreign Affairs issuedapress release, “Myanmar leaves no one behind in its fight against COVID-19 in Rakhine State,” describing its intensified efforts to raise public awareness about the virus “in Rakhine and Muslim villages and IDP camps,” and to work with the UN and INGOs to address any possible outbreak in the IDP camps. Continue reading ““Leaving no one behind” amidst genocide: the Myanmar government’s response to Covid-19 in Rakhine State”